श्रीमद्भागवत गीताहिन्दू धर्मका पवित्रतम ग्रन्थ र अध्याय-१ । - Nepal Times Online
अर्जुन विषादयोग धृतराष्ट्र उवाच
अर्थ धृतराष्ट्रले सोधे— हे सञ्जय, धर्मक्षेत्ररुपी कुरुक्षेत्रमा युद्धका इच्छाले जम्मा भएका मेरा छोराहरु र पाण्डुका छोराहरुले के गरे ?१।
अर्थ सञ्जयले भने— राजा दुर्याेधनले त्यसबेला व्यूहाकारमा सजाएको पाण्डव सेनालाई देखेर आचार्य द्रोणको नजीकमा पुगेर यसो भने–।।२।।
हे कृष्ण, म विजय, राज्य तथा सुख केही पनि चाहन्न । किनभने हे गोविन्द, हामीलाई राज्यले के हुन्छ ? भोगहरुले के हुन्छ ? अथवा बांच्नाले पनि के हुन्छ ? जसका निम्ति हामीलाई राज्य, भोग, तथा सुखहरु चाहिएका छन् तिनै आचार्य, काका, भतिजा, बाजे, मामा, ससुरा, नाती, साला तथा अरु सम्बन्धीहरु प्राण र धनको पनि आशा छाडेर युद्धमा आएका छन् । हे भगवान्, यिनीहरु मलाई मार्दछन् भने पनि मारुन्, तर म पृथ्वीको त के कुरा ? तीनलोक अर्थात् स्वर्ग, मत्र्य, र पातालको रजाई मिल्छ भने पनि मार्न चाहन्न“ । हे जनार्दन, कौरवहरुलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला ? यी अत्याचारीहरुलाई मारेर हामीलाई त केवल पाप मात्र लाग्ला । त्यस कारण, आफ्ना बन्धु धृतराष्ट्रका सन्तान मार्नु उचित छैन । किनभने हे माधव, आत्मीयजनलाई नै मारे पछि हामी कसरी सुखी हुन्छौं ? यद्यपि उनीहरुको आ“खा लोभले टालिदिएको छ र उनीहरुले कुलनाश र मित्र द्रोहको पाप देखिरहेका छैनन् । तर हामीले यो सबै जानी जानी यस पापबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नु पर्दैन ? अर्थात् पर्छ ।।
(युद्ध त प्रारम्भ भयो, अब केवल तिमीमाथि शस्त्र प्रहार हुन मात्रै बा“की छ, अब तिमी के गर्छौ ? यसको जवाफ अर्जुनले दिन्छन् )
रमेशको बिहेको दिन कल्पनाको मन छुने रत्यौली एक पटक अबश्य हेर्नुहोला ।(भिडियो)